Depa 03 EsSam yesebe complex - I-Airbnb
Depa 03 EsSam yesebe complex
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMarco Antonio
Ifulethi elitofotofo kwaye litofotofo kakhulu Ineebhedi ezi-2 eziphindwe kabini ezixhotyiswe ngokupheleleyo ngamashiti, imiqamelo, kunye nemiqamelo. Ilungele ukuhlala kwabantu aba-4 kwigumbi. Ngaphakathi kwendlu uya kufumana: i-minibar, iitawuli, umenzi wekhofi, iipani, izitya zokupheka, isinyithi, ii-hook, ngendlela efanayo igumbi linendawo yokuhlamba kunye nokuxhoma iimpahla. Indawo yokuhlambela inamanzi ashushu, isepha kunye nephepha langasese. Indawo yokupaka yasimahla kunye ne-WIFI kwisakhiwo sonke
Indawo entle netofotofo, ibekwe kufutshane neplaza las flores (ngaphakathi kweplaza ungafumana iwalmart, coppel, cinepolis, liverpool, promoda) sibekwe ibhloko enye ukusuka kwindawo enkulu yedolophu apho unokufumana khona izithuthi zikawonkewonke. downtown. Sinebhedi ezimbini eziphindwe kabini ezixhotyiswe ngokupheleleyo ngamashiti, imiqamelo, kunye nemiqamelo. Ilungele ukuhlala kwabantu aba-4 kwigumbi. Ngaphakathi kwendlu uya kufumana: i-minibar, iitawuli, umenzi wekhofi, iipani, izitya zokupheka, isinyithi, ii-hook, ngendlela efanayo igumbi linendawo yokuhlamba kunye nokuxhoma iimpahla. Indawo yokuhlambela inamanzi ashushu, isepha kunye nephepha langasese. Sinendawo yokugcina iimoto kunye ne-WIFI kwisakhiwo sonke.
Ubumelwane buthe cwaka, sine oxxo 2 iibhloko kude kunye nePlaza las Flores iibhloko ezi-4 kude, kunye neebhloko ezi-3 kude ungafumana indawo yokutyela emnandi ngokupheleleyo yebarbecue kunye nebirria.
Inombolo yam yefowuni ngu-9631235049 ungandithumelela umyalezo kwaye ndonwabile ukukunceda